के तपाईको सेयर डिम्याट भयो ? अब पूर्ण डिम्याट सेयर मात्र हुनेछ कारोबार ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > के तपाईको सेयर डिम्याट भयो ? अब पूर्ण डिम्याट सेयर मात्र हुनेछ कारोबार !
के तपाईको सेयर डिम्याट भयो ? अब पूर्ण डिम्याट सेयर मात्र हुनेछ कारोबार !
काठमाण्डौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई सेयर डिम्याट गर्न आह्वान गरेको छ । कम्पनीले सेयर बजारमा पूर्ण डिम्याट भएको सेयर मात्र कारोबार हुने भएकाले दोस्रो बजारमा कारोबारमा लैजान सेयर डिम्याट गराउन सेयरधनीलाई आह्वान गरेको हो ।
जलविद्युत कम्पनीले ८ करोड कित्ता संस्थापक र २ करोड कित्ता साधारण गरि कुल १० करोड कित्ता सेयर डिम्याट गराउदैछ । कम्पनीको सेयर डिम्याट छिटो गराउनका लागि सेयर रजिष्टर ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले सन्ध्याकालिन काउन्टर समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यसका साथै, क्यापिटलले सेयरहरु अभौतिकिकरण गर्न धितोपत्र निक्षेप खाता अर्थात डिम्याट खाता अनिवार्य रहेकाले डिम्याट खाता खोल्न आग्रह गरेको छ । खाता खोलिसकेका सेयरधनीले आफूले खाता खोलेको निक्षेप सदस्य कँहा सक्कल सेयर प्रमाणपत्र सहित सम्पर्क राख्न भनेको छ ।
कुल सेयर संख्याको १० प्रतिशत सेयर डिम्याट नभई नेप्सेमा कारोबार सुरु नहुने व्यवस्था रहेकाले कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर डिम्याट भैसकेपछि मात्र कारोबार सुरु हुनेछ ।
१४ असार २०७३, १।००
२०७३ असार १४ गते १३:४३ मा प्रकाशित
अस्थिरताले कृषि बैज्ञानिकहरु बिदेश पलायन : कृषिमन्त्री गजुरेल
सडक निर्माण पूरा, लाभान्वित भए तीन जिल्लाका बासिन्दा !
मैदानमै पादेपछि रेफ्रीले दिए खेलाडीलाई रातो कार्ड
सीमावर्ती क्षेत्रमा सेनाको टोली
एनआइबिएलको तपाई कति कित्ता भर्दै, सय कि ६० लाख ?
मुलुकको शान्ती प्रक्रियामा अवरोध नगर्नु उपयुक्त : प्रधानमन्त्री ओली
विमान दुर्घटनामा परी निधन हुनेको सम्झनामा दीप प्रज्वलन